Dr. Tint Swe's Writings: Wet tip ဟိုနေရာ စိုလာတတ်တဲ့ ရောဂါ
မေးမြန်းသူ (၁) “ရောဂါတစ်ခုရှိနေပါတယ် ဆရာရေ။ ပြောရမှာတော့ ရှက်စရာကောင်းလှပါတယ်။ နားနှင့်မနာပဲ ဖဝါးနဲ့သာ နာစေချင်ပါတယ်။ Sexy girl တွေ ကြည့်တဲ့အခါ အမြဲတန်းလိုလို လိင်တံက Semen သုက်အရည်တွေ ထွက်တက်ပါတယ်။
အဲဒါ ဘယ်လိုလုပ် ကုစားရမယ်ဆိုတာကို ကျေးဇူးပြုပြီး ဖြေကြားပေစေချင်ပါတယ်။ လိင်အဂ်ါမှာ အရည်မစိုအောင်း လုပ်သင့်သလား၊ မလုပ်သင့်ဘူလားဆိုတာကို ကျေးဇူးပြုပြီး ဖြေကြား ပေးစေချင်ပါတယ်။ နောက် လိင်အဂ်ါမှာ အရည်မစိုအောင် လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ဆိုကျိုးတွေ၊ ကောင်းကျိုးတွေကို မျှဝေပေးစေချင်ပါတယ်။ လူတိုင်းဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် ဆရာရဲ့ Website ထဲမှာ ဒီအကြောင်းအရာကို ရေးမယ်ဆိုရင် ကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်။ လူတိုင်းက ရှက်တက်တဲ့သူတွေဆိုတော့ မေးရမှာ အဆင်မပြေနိုင်ကြပါဘူး။”
မေးမြန်းသူ (၂) “စိတ်တော့မရှိကြပါနဲ့နော်၊ ကျနော်တစ်ခုလောက်မေးချင်လို့ပါ။ စိတ်ပညာနဲ့မကြည့်ပဲ၊ ဆေးပညာနဲ့ပဲ ကြည့်ရပါဗျာ။ ကျနော် လူပျိူဝင်ကာစ တစ်ခါကတော့ ဖြစ်ဘူးပါတယ်။ အဲ့ဒီတုန်းကတော့ လူပျိုဝင်ကစပဲလို့ ထင်ပြီး၊ နေလိုက်တယ်။ ယောက်ျား အင်္ဂါကနေ အရည်ကြည့်လေးတွေထွက်တယ်။ နောက်ပိုင်းတော့ မထွက်တော့ဘူး။ အခု ၂၃ ဝင်ခါစမှပဲ ထပ်ဖြစ်လာတယ်။ ဖြစ်ပုံကတော့ ဒီလို အပြာကားတွေ ကြည့်ရင်ထွက်တယ်။ မကောင်းတဲ့စကားတွေ ပြောရင်လဲ ထွက်လာတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ စိတ်တက်ကြွလို့ပဲဆိုပြီး နေလို့ရတယ်။ ဒါပေမယ့် မစဉ်းစားပဲလဲ ထွက်နေပြန်ရော။ ဘောင်းဘီလဲရတာလဲ မနည်းတော့ဘူး။ အဲဒါ ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ သိချင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။ အဲ့လိုမဖြစ်အောင်လဲ ဘာဆေးတွေဆောင်ထားရင် ကောင်းမလဲဆိုတာ သိချင်ပါတယ်။ အဲ့လိုဖြစ်ရင် အားပြတ်တာတော့ အမှန်ပဲ။ စားတိုင်းလဲ မဝဘူး။ ပိန်ပိန်လာတယ်။ အဲဒါ အစများ ဖြစ်လာနိုင်မလားဗျာ။ ဟိုရောဂါကလဲ ၂ နှစ် နဲ့ ၁ဝနှစ် ကြားမှာ ပေါ်တက်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အရည်တွေ မကျအောင် ဘယ်လိုနေထိုင်ရမယ်ဆိုတာ ပြောပြပေးကြပါခင်ဗျာ။”
ဒီလိုဖြစ်တာက သိပ် (နော်မယ်လ်) ပုံမှန်ဖြစ်တယ်။ ယောက်ျားလေးတိုင်း ဖြစ်တယ်။ မိန်းကလေးလဲ ဖြစ်တာဘဲ။ လိင်စိတ်ကို ဆွပေးတာကို ကြည့်တာဖြစ်ဖြစ်၊ စိတ်ကူးတာဖြစ်ဖြစ် လိင်အဂ်ါမှာ အရည်စိုလာတာ ပုံမှန်ပါ။ ဆေးကုစရာ မလိုပါ။ လိင်စိတ်ဆိုတာမျိုးက စိတ်အပြင် ဟော်မုန်းဓါတ်ကြောင့်ပါ ဖြစ်ရတာပါ။ စိတ်မကစားလဲ ဟော်မုန်းသတ္တိပြလာရင် ဒီစိတ်က ကြွလာတယ်။ ဖြစ်ဖန်များသူဆိုရင် အကျင့်လို ရလာတတ်သေးတယ်။
မအိပ်ခင်က ဘာမှ စိတ်ကူး မထားတာတောင်၊ အိပ်မက်မက်ယင်း အိပ်ရာထဲမှာ သုတ်ထွက်တာမျိုးလဲ ရှိတယ်။ ဒါဟာ ထွက်ပေးဘို့ လိုနေတာကြောင့်လို့ ပြောရင် ရနိုင်တယ်။ ဘာမှ စိုးရိမ်စရာမလိုပါ။ လူ့ကိုယ်ခန္ဓာကြီး တည်ဆောက်ထားပုံနဲ့ လူ့ဇီဝကမ္မအလုပ်များဟာ အင်မတန် ကောင်းလွန်းလှတဲ့ စက်တို့ ကွန်ပြူတာတို့ထက် အဆ အများကြီး သာတယ်။ ပိုတာ-မလိုတာကို ထုတ်ပြစ်တတ်တယ်။ လိုတာကို ဖြည့်ပေးနိုင်တယ်။ မသင့်တာကို သန့်ပေးနိုင်တယ်။
ဒီပြဿနာမှာလဲ Semen အရည်ကြည် ဖြစ်ဖြစ် Sperm သုတ်ရည်ဖြစ်ဖြစ် ထွက်သင့်ချိန်မှာ ထွက်စေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ Semen အရည်ကြည်ဆိုတာက လိင်စိတ်ပေါ်လာရင် အင်္ဂါအဝမှာ စိုလာတာကိုပြောတာပါ။ တကယ်လို့ ဆက်ဆံမယ်ဆိုရင် အဆင်ပြေအောင် ပြင်ဆင်ပေးမှုဖြစ်တယ်။ Sperm သုတ်ရည်ကတော့ လိင်စိတ် ပြည့်ဝ-ကျေနပ် သွားချိန်မှာ ယောက်ျားအင်္ဂါကနေ ထွက်တာပါ။ မိန်းမတွေမှာလဲ Orgasm ရတယ်ဆိုရင် အရည်ထွက်လာတယ်။
ဒီလိုဖြစ်ခြင်း နှစ်မျိုးလုံးကြောင့် အားအင် ကုန်ခမ်းစေတာ အမှန်ပါ။ လိင်စိတ် ဖြစ်ပေါ်လာတာနဲ့ နှလုံးခုန် မြန်မယ်၊ သွေးလျှောက်တာ ပိုလာတယ်။ နွေးလာတယ်။ ဆောင်းတွင်းမှာတောင် အေးမှန်းမသိဘူး။ ဒါ့ကြောင့် အား ပိုသုံးပြစ်လိုက်တယ်။ (ကလိုရီ) လျှော့ချင်ရင် နည်းကောင်းတခုလို့တောင် ဆိုကြသေးတယ်။
Orgasm ရသွားရင် ဘယ်သူဘဲဖြစ်ဖြစ် (အင်နာဂျီ) အများကြီး ကုန်သွားတာမို့ ခြေပြစ်-လက်ပြစ် ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီလိုဖြစ်ပြီးတာနဲ့ တခါတည်း အိပ်စက်လိုက်ရင် အားအင်တွေ အလိုလို ပြန်ပြည့်လာတယ်။ မနက် အိပ်ယာထချိန်တိုင်းမှာ အားမှန်သမျှ ပြည့်ဝနေတယ်။
တကယ်လို့ အိပ်ရာထဲမှာ သု့ဖါသာ သုတ်လွှတ်တာ ဖြစ်ဖြစ်နေရင် ညမအိပ်ခင် ရေမသောက်ဘဲနေ၊ ဆီးသွားပြီးမှ အိပ်ရာဝင်၊ တခါခါ (မာစတာဘိတ်) လုပ်ပါလို့ တချို့က အကြံပေးတယ်။
အားအင်ကုန်တာကို နားတာ၊ အိပ်တာနဲ့ မလုံလောက်ရင် ရိုးရိုးအားဆေး (ဗီတာမင် ဘီအုပ်စု) ကို သောက်ပါ။ အမျိုးအစား ကောင်းတာ ရွေးသင့်တယ်။ နာမည်ရှိ ဆေးကုမ္ပဏီက လာတာမျိုးပြောတာပါ။ အစားအသောက်မှာလဲ အားဖြစ်စေတာမျိုး ပိုစားပါ။ အမျိုးသမီးများ အတွက်ဆိုရင် ဗီတာမင် ဘီ၊ စီ၊ အီး အပြင် ဇင့်(သွပ်ဓါတ်) နဲ့ မက်ဂနီဆီယံ ဓါတ်ဆားတွေ ပါဘို့ လိုတယ်။ အစားအစာထဲကဆိုရင် ပဲပုတ်စေ့ကကောင်းသတဲ့။ ယောက်ျားတွေအတွက် ကြက်ဥ၊ ငှက်ပျာသီးကို ညွှန်းတယ်။ သင်္ဘောသီးကို အရှောင်ခိုင်းတာကတော့ သုတေသန မဟုတ်ပါ။ ကိုယ်တွေ့ဆိုပြီး တယောက်ချင်းက ပြောတာပါ။ နှလုံးအတွက်ကောင်းတဲ့ အစားတွေဟာ ဒီကိစ္စအတွက်ပါ ကောင်းတယ်လို့ ဆိုတာလဲရှိတယ်။
လိင်အတွက် ဆေး၊ အစာတွေဆိုတာက လိင်စိတ် အားပေးတာတွေ ဖြစ်တာမို့ မေးခွန်းမေးသူများ အလိုနဲ့ ပြောင်းပြန် ဖြစ်နေတာကို သတိထားပါ။
ဒီလိုဖြစ်တာကို ကိုယ်က မဖြစ်စေချင်ရင် အမြင်-အကြား-စိတ်ကူးစိတ်သမ်း-အထိအတွေ့၊ လိင်စိတ်ကြွစေတာမှန်သမျှ ရှောင်ပါ။ အားနည်းတာ သက်သာအောင် ဒီလိုဖြစ်ပြီးတာနဲ့ ခဏအနားယူလိုက်ပါ။ စိတ်မှာ “ငါ ဒါ့ကြောင့် အားတွေ ယုတ်သွားလိုက်တာ” လို့ မတွေး၊ မထင်ပါနဲ့။ “ငါ့မှာ အားတွေ ပိုနေလို့ ဖြစ်နိုင်စွမ်းတာ” လို့ မှတ်ပါ။ “အသုံးပြုစဉ် အားပြန်ဝင်သည်” ဆိုတဲ့ “အေစီ-ဒီစီ ဒိုင်နမို” ကိုယ်ထဲမှာ ရှိနေပါတယ်။
Hello November နိုဝင်္ဘာ (၂)
Halloween snowflakes ဆောင်းဦးအကြို နှင်းပွင့်ဖတ်ေ...
Group Photo ဓါတ်ပုံထဲမှာ ဘယ်လိုပြမလဲ
U.S. blacklists Myanmar official ahead of Obama vi...
Young father ယောက်ျားကအသက်ငယ်နေရင် ဉာဏ်ရည်မမှီတဲ့က...
Hypothyroidism လည်ပင်းကြီး ခွဲပြီးသည့်နောက် (၁)
Faith for Women’s Healthcare
Health Care withaNew Friend
Learning with Dr. Tint Swe
Blood test သွေးကစကားပြောတယ်
Low Testosterone တက်စတိုစတီရုံး နှင့် လိင်စိတ်
Milk Storage နို့ရည်ကို ဘယ်လိုထားသိုမလဲ
Halloween Day နက်ဖြန် ‘ဟဲလိုဝင်းဒေး’
My food ဆရာ ဘာတွေစားနေလဲ
Synthetic cannabinoids မူးယစ်ဆေးသစ်တွေ
Molly လူငယ်တွေ သုံးနေကြတဲ့ စိတ်ကြွဆေး “မော်လီ” ဆေး...
Yabba (2) ယာဘ ဖြတ်တဲ့ဆေးတမျိုး
Amphetamines (2) ရာမ ဇာတ်လမ်းတခု
Allergy Relief Kit (အလာဂျီ) ရှေးဦးသူနာပြု ဆေးအိတ်...
Allergies Treatment (အလာဂျီ) ကိုကုသခြင်း
Alcohol (1) အရက်ဋီကာ အတိုအထွာ
How to quit Alcohol အရက်ဘေးက ဝေးကြပါစေ
Alcoholism အရက်အတွက် ခက်နေသူတွေ
Acne Laser treatment ဝက်ခြံကို လေဆာ နဲ့ ကုသခြင်း
HIV asaweapon လက်နက်လိုအသုံးပြုခြင်း
Astigmatism and Amblyopia သူငယ်အိမ်စောင်းခြင်းနဲ့ ...
Erectile Dysfunction Physiology ပန်းသေ-ပန်းညှိုး ဇ...
Men’s Medicines ယောက်ျားတွေ မေးတဲ့ဆေးများ
Food Stamp အစားအသောက်ကဒ်
Obama Phone အိုဘားမားဖုန်း
Egg freezing မျိုဥခဲခြင်း
G9နိုင်ငံရေးထိပ်သီး ဆွေးနွေးပွဲကြီး
Trafficking for Organ Trade ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း ...
My native ကိုယ့်မွေးရပ်မြေကို
My wish ဆုတောင်းတိုင်းသာ ပြည့်စေချင်ပါသည်
A signboard အရောင်မလက်တော့ပေမဲ့ မှိုမတက်သေးတဲ့ ဆိုင...
A doctor who also writes (1) ဆေးပညာစာရေးသူ (၁)
Low white blood cell count သွေးဖြူဥနည်းခြင်း
Elementary politics သူငယ်တန်းနိုင်ငံရေး
ရှစ်လေးလုံး NLD နဲ့ ကျွန်တော်
Spelling error မှားရေးမိတာလား၊ အမှားကိုအမှန်ထင်နေတ...
Kidney stones ကျောက်ကပ်-ကျောက်
Abraham Lincoln ‘လင်ကွန်း’ ကံကောင်းသွားခြင်း
Dress code တောင်းမှာအကွပ် လူမှာအဝတ်
Breast Cancer Treatment regimes ရင်သား-ကင်ဆာ ကုထုံ...
Breast Cancer Chemotherapy ရင်သား-ကင်ဆာကို ဆေးပေးက...
Breast Cancer (2) ရင်သားကင်ဆာ (၂)
Breast Cancer ရင်သား-ကင်ဆာ
Burma is not far-off အင်ဒီယာနာ မဲဇာမဟုတ်
Hepatitis B အသည်းရောင် (ဘီ) ပိုး